Soo-saareyaasha dahaaran iyo Soo-saarayaasha - Shirkadaha Dahaaran ee Dahaaran
Daabacaadda Shaashadda Silk Dahaaran Glass
YB Silk Daabacaadda Dahaarka Muraayadda (oo inta badan loo yaqaan IGU ama IG) wuxuu ka kooban yahay 2 ama in ka badan oo gogo 'galaas ah, oo lagu kala saaray qashin wax lagu buuxiyo oo wax lagu buufiyo ah oo si iskiis ah loogu xiray dhammaan dhinacyada si loo sameeyo hal unug. YB Silk Daabacaadda Dahaarka Muraayadda ayaa adeegsanaya muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-caddeyn adag oo leh muraayada hore ee baabuurta. Hawada si dabiici ah u shaabadaysan (Argon, Krypton waa ikhtiyaari) boosku wuxuu abuurayaa caqabad kuleylka iyo wareejinta codka taasoo ka dhigaysa IGUs aad wax ku ool u leh yareynta kororka kuleylka hawo-ama hawo. Marka lagu daro Low-E ama daahan milicsiga, waxqabadka insulin ee IGUs si weyn ayaa loo hagaajiyay.
YB Vacuum Glass oo ah jiil cusub oo muraayad tamar-karti leh, muraayadda faakiyuumka ayaa leh faa iidooyinka waxqabadka kala iibsiga kulaylka, muraayaddu waxay ka faa'iideysaneysaa kuleylka kuleylka yar ee hawada. Marka laga hadlayo kala wareejinta kuleylka, kuleylka kuleylka ee hawada ama argon la buuxiyey wuxuu leeyahay hawo kuleyl yar. Sababtoo ah iska caabinta kuleylka sare, ka hortagga uumiga iyo waxqabadka qabowgu wuu ka fiican yahay. Muraayadda faakiyuumka waxaa loo isticmaalaa dhismayaasha, darbiyada daahyada, albaabbada iyo daaqadaha, iwm. Muraayaddeenna fayadhowrka tayo sare leh waxay noqon kartaa mid siman ama qalloocan hadba sida aan doonayo. Cabir kasta, midab ama naqshad naqshad waliba waa la habeyn karaa.
Shaashadda Silk Daabacaadda Keega Shaashadda Muraayadda Muraayadda
YB Silk Screen Daabacaadda Cake Showcase Glass Door wuxuu adeegsanayaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortaga, qarax-caddeyn la'aanta muraayadda gawaarida. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Muraayad Triple ah ayaa loogu talagalay iska caabinta UV. YB Silk Shaashadda Daabacadda Cake Showcase Glass Door waxay la kulmi kartaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo 0 ℃ -22 ℃. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Double Glazing Wine Cabinet Glass Door
YB Double Glazing Wine Cabinet Glass Door wuxuu adeegsanayaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-caddeyn adag oo leh muraayada hore ee baabuurta. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Muraayad Triple ah ayaa loogu talagalay iska caabinta UV. YB Double Glazing Wine Cabinet Glass Door wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo 5 ℃ -22 the, goomaha leh magnet xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.